सशस्त्र प्रहरीका ११ जना डीआईजीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूची) - Naya Pageसशस्त्र प्रहरीका ११ जना डीआईजीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूची) - Naya Page
काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले ११ जना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बिहीबार साँझी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी डीआईजीहरूको सरुवा गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार डीआईजी मन्दीप श्रेष्ठलाई गढिमाई वाहिनी हेटौंडाबाट सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय आईजीपीको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ भने डीआईजी किशोर प्रधानलाई हेटौंडा पठाइएको छ । यसअघि प्रधान विन्ध्यावासिनी वाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीमा पनि प्रमुख थिए ।
डीआईजी कुलबहादुर नेम्वाङलाई प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विभागबाट विन्ध्यावासिनी वाहिनी, रूपन्देही सरुवा गरिएको छ । यस्तै डीआईजी राजु अर्याललाई पशुपतिनाथ वाहिनी, काठमाडौंको प्रमुखबाट प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
पशुपति वाहिनीको प्रमुखमा चाहिँ डीआईजी वंशीराज दाहाललाई ल्याइएको छ । यसअघि दाहाल बराह वाहिनी मुख्यालय सुनसरीका प्रमुख थिए अर्थात् पूर्वाञ्चलका कमान्डर थिए । उनको स्थानमा डीआईजी कमल गिरीलाई पठाइएको छ । यसअघि उनी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मुख्यालयमा थिए ।
सशस्त्र प्रहरीको पश्चिमाञ्चल पोखराको कमान्डरबाट डीआईजी नारायणदत्त पौडेललाई सरुवा गरी मुख्यालयको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग ल्याइएको छ भने पश्चिमाञ्चलको कमान्डरमा डीआईजी शम्भु सुवेदीलाई पठाइएको छ । यसअघि सुवेदी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय सिंहदरबारमा थिए । सुरक्षा परिषदमा तत्काल कसैलाई सरुवा गरिएको छैन ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ को कमान्डर डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग मुख्यालयमा सरुवा गरिएको छ । गौतमको स्थानमा डीआईजी गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई पठाइएको छ । यसअघि ठाडा मुख्यालयको कार्य तथा सीमा विभागमा कार्यरत थिए । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको मानवस्रोत विभागमा कार्यरत डीआईजी दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको कमान्डर बनाई कैलाली पठाइएको छ ।